फेरि टिपरले ठक्कर दिँदा लामाको मृत्यु – All top Here
Home/समाचार/फेरि टिपरले ठक्कर दिँदा लामाको मृत्यु
फेरि टिपरले ठक्कर दिँदा लामाको मृत्यु
फेरि यतिबेला हेटाैडामा टिपर आतङ्ककाे घटना घटेका छ । हेटौंडाबाट वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको टिपरले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छना ७ ख ६५९७ नम्बरको टिपरले सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको ना ५३ प ३३१३ नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा ठेगाना नखुलेका करिब ५५ वर्षीय सूर्य बहादुर लामाको मृत्यु भएको बाराका डीएसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिए ।वीरगञ्ज–हेटौंडा सडकखण्ड अन्तर्गतपर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको आधाभार क्षेत्रमाआइ तबार दिउँसो १ बजेको समयमा टिपरले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटर चालक लामाको घट्नास्थलमै मृत्यु भएको उनले बताए ।डीएसपी गौतमकाअनु सार ठक्कर दिने टिपरसहित चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ । मृतकको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल कलैयामा राखिएको उनको भनाइ छ ।काठमाडौं, असार २१ । काठमाडौं बासीले मेलम्चीको पानी कहिले पिउन पाउँछन् ? वर्षौंदेखि यहि एउटै प्रश्न झेल्दै आएका खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरुलेआइतबार दिउँसोपत्रकार सम्मेलन नै गरेर आयोज ना सम्पन्न हुने चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरे । त्यसअघि आइतबार विहान९ बजेर ९५ मिनेट मेलम्चीको सुरुङमा पानी भर्न सुरु गरिएको थियो । त्यसलाई सरकारी अधिकारीहरुले आयोजना निर्माणमा ठूलो उपलब्धी भनेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा खानेपानी मन्त्री विना मगरले ‘छिट्टै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकोउद्घाटन’ हुने बताइन् उनले समाजिक तथा राजनीतिसहित विभिन्न प्राविधि समस्या झल्दै आयोजना सम्पन्न हुने स्थितिमा आएको बताइन् तर उनले आयोजना कुन दिन ‘उद्घाटन’ हुन्छ भनेर तोक्न सकिनन् मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले पनि प्राविधिक कुराभएकाले मिति तोक्न नसकिने बताए मन्त्रीले भनेअनुसार आयोजना उद्घाटन हुनुभनेको उपभोक्ताको घर-घरमा मेलम्चीको पानी आइपुग्नु हो । तर, यसका लागि अझै केही समय पर्खिनुपर्ने देखिएको छ ।=मेलम्ची खानपानी आयोजनाका प्रमुख तिरेशकुमार खत्रीका अनुसार मेलम्चीको २६ किलोमिटरको सुरुङ भरिन १५ देखि २० दिन लाग्छ । अहिले परीक्षणका लागि प्राविधिक मापदण्डअनुसार प्रतिसेकेन्ड २६० लिटर पानीका दरले सुरुङमा पानी प्रवाह गरिएको छ । सुरुङमा पानी भरिएपछि करिब १० दिन यतिकै राखिनेछ त्यसपछि र प्रतिसेकेन्ड २६० लिटरकै दरमा बाहिर पानी छोडिने छ र, सुरुङ खाली हुन १५ देखि २० दिन लाग्नेछ ।पानी सबै फालिसकेपछि सुरुङको गुणस्तरपरीक्षण गरिनेछ यसका लागि करिव ७
दिन लाग्नेछ । त्यसक्रमा कुनै केही समस्या देखिए त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसबारे अहिले अनुमान गर्न गाह्रो छ । र, यो सबै काम सकिएपछि मात्र नियमित रुपमा सुरुङमा पानी भर्न थालिने छ ।यो पानी सुन्दरीजलमा तयार रहेका २ वटा प्रशोध न केन्द्र हुँदै वितरण प्रणालीमा पठाइने छ ।सबै अवस्था
सामान्य हुँदा मेलम्चीको पानी मुख्य वितरण लाइनमा पठाउने काम थाल्न अबको दुईदेखि तीन महिना लाग्ने आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् । साथै
आयोजनाको स्थायी बाँध र बालुवा थिग्राउने संरचना (हेडवर्क्स ) बनाइसकेको छैन । हेडवर्क्स २०७७ पुससम्म बनाउने गरी चिनियाँ कम्पनी सिनोले काम गरिरहेको छ । हेडवर्क्स बनाएर सुरुङमा पानी हाल्न अझै केही समय लाग्ने भएपछि नदीमा अस्थायी बाँध र डाइभर्सन बनाएर निर्माणाधीन हेडवक्र्स छल्ने गरी मूल सुरुङमा पानी हालिएको छ । यसले सुरुङमा बालुवा भरिन सक्छ मेलम्चीको पानी वितरण गर्न शहरका धेरै भागमा नयाँ लाइन जोडिएका छन् । आठवटा नयाँ ट्यांकी बनेका छन् । मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल झरेपछि ट्यांकी र पाइपलाइनको सफाइ र परीक्षण गनुपर्ने हुन्छ चक्रपथ आसपासका एक तिहाई क्षेत्रमा पुरानै पाइपबाट मेलम्चीको पानी वितरण हुनेछ । महाराज गञ्ज, धुम्बाराही, समाखुसी, कलंकी क्षेत्रमा नयाँ पाइप राख्न बाँकी छ । पुरानो पाइपलाइन निकै पुरानो भएकाले ‘लिकेज’को समस्या पनि ठूलो छ ।आयो जना प्रमुख खत्री सुन्दरीजलमा पानी खसेको एक वर्षसम्म वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने बताउँछन् । पुराना प्रणालीलाई हटाउँदै नयाँमा पानी पठाउने र घर-घरमा पानी पुर्‍याउने काम क्रमशः गरिने उनले बताए काठ
मा डौंमा मेलम्चीको पानी वितरणको काम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटे डले गर्नेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले मेलम्चीको सुरुङबाट सिन्धु
पाल्चो कस्थित याङ्ग्री र लार्केर् खोलाको पानी ल्याउने दोस्रो परियोजनामा काम थाल्नेछ । मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी मात्रै आउने छ भने दोस्रो परियोजना बनेपछि त्यस्तो परिमाण ५४ करोड लिटर पुग्नेछ ।
कोरोनाबाट काठमाडौंका कांग्रेस नेताको मृ,त्यु
पुडासैनी प्रकरणः प्रहरीले जुटायो १०० दशी प्रमाण,
पारसले गरे झु’ण्डिएरआ’त्मह’त्या !
रुकुम जाजरकोट घटना : घटना भएको २३ दिनपछि प्रहरीको यो निष्कर्षले लियो अर्कै मोड,
रुकुम चौरजहारी घटना थप एक जनाको शव भेटियो मृत्यु हुनेको संख्या पाँच